सुचना/प्रविधि Archives - Page 14 of 18 - Nepali Online News Media-shikharnews.com
यसकारण निधिप्रति देउवा नरम, प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले निधिलाई उपसभापति बनाउने
२०७४ वैशाख २२ शुक्रवार
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहपछि विमलेन्द्र निधिले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीबाट दिएको राजीनामा फिर्ता गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदा आफूसँग छलफल नभएको भन्दै निधिले वैशाख १७ मा राजीनामा दिएका थिए । तर, निधि भड्किँदा पार्टीभित्रको समीकरण,...
आइफोनको बिक्री कस्तो छ ?
२०७४ वैशाख २० बुधवार
आइफोनका ग्राहकहरु नयाँ आइफोनको पर्खाइमा बसेपछि यो वर्षको तीन महिनामा यसको विक्री घटेको देखिएको छ । सन् २०१६ को तीन महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा आइफोनको विक्री घटेको आइफोनले जनाएको छ । एप्पलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नतिजा अनुसार गत...
इडीभीको नतिजा आज आउने,यसरी हेर्नुहोस् नतिजा !
२०७४ वैशाख १९ मंगलवार
काठमाडौं,बैशाख १९ – अमेरिकाको इलेक्ट्रोनिस डाइभर्सिटी भिसा(इडीभी) २०१८ को नतिजा मंगलवार राती सार्वजनिक हुने भएको छ । गत वर्ष भरिएको डीभीको नतिजा सार्वजनिक हुन लागेका हो । गत वर्षको ४ अक्टोबर २०१६ देखि ७ नोभेम्बर २०१६ सम्म डीभीको लागि आवेदन...
मोबाइलमै हेर्न सकिनेछ स्थानीय चुनावकाे मत परिणाम !
२०७४ वैशाख १६ शनिवार
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि कल सेन्टर र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सूचना प्रवाहलाई चुस्त र प्रविधिमैत्री तुल्याउने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले कल सेन्टर र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको हो । कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा...
नोट सेभेन फेरी बजारमा आउँदै, मूल्य ३० हजार कम
२०७४ वैशाख १४ बिहीवार
ब्याट्री पडि्कने समस्यापछि बजारमा पठाएका सबै ग्यालेक्सी नोट सेभेन फिर्ता लिएर उत्पादन नै बन्द गरेको सामसुङले फिर्ता लिएका नोट सेभेन मर्मतपछि पुनः बजारमा पठाउने भन्ने समाचारलाईर् यसअघि नै पुष्टि गरिसकेको छ । यद्यपि मर्मत गरिएका नोट सेभेनको बिक्रि कहिलेदेखि सुरु...